Rafitra niandraikitra ny sarimihetsika :: Vonjimaika hatrany ny fisoloan-toerana ny OMACI teo aloha • AoRaha
Rafitra niandraikitra ny sarimihetsika Vonjimaika hatrany ny fisoloan-toerana ny OMACI teo aloha
Miandry ny tohin’ny tantara. Nohamafisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) ny mampifanaraka amin’ny lalàmpanorenana an’ilay didy hitsivolana fanafoanana ny rafitra momba ny sarimihetsika sy ny sary miaina na ny ofisy malagasy misahana ny sarimihetsika (Omaci). Raha ny tokony ho izy dia mijoro aorian’izao fanamafisana avy amin’ny HCC izao ny rafitra vaovao misolo ny Omaci, izay ho eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina
Tsy nampitovy hevitra an’ ireo mpisehatra sy mpikirakira ny tontolon’ny sarimihetsika ny fivoahan’ilay didy hitsivolana manafoana ny lalàna laharana faha-2017-011 tamin’ny 26 jolay 2017 mikasika ny politikam- pirenen’ny sarimihetsika sy ny sary miaina, tao amin’ny tatitry ny filan-kevitry minisitra, tamin’ny 18 avrily lasa teo. Nisy ireo nankato, tao koa ireo nitsipaka.
«Inoana fa hampiombona an’ireo mpisehatra eo amin’ny sarimihetsika io fanamafisana nataon’ny HCC io. Fotoana hirosoana amin’ny dingana manaraka izao dia ny hametrahana lalàna mety sy mifandraika amin’ny tena zava-misy marina ary mamaly ny hetahetan’ny mpisehatra isan-tsokajiny», hoy Razafiarison Francis, tale jeneraly misahana ny kolontsaina eo anivon’ny minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina.
Mandra-piandry ny fananganana rafitra vaovao hiahy ny sarimihetsika malagasy, dia handray vonjimaika ny fitantanana ny sarimihetsika eto Madagasikara sy izay rehetra notantanin’ny Omaci teo aloha hatrany ny tale jeneraly misahana ny kolontsaina. «Ao anatin’ny famolavolana ny lalàna vaovao miainga amin’ireo soson-kevitra voangona avy amin’ireo mpisehatra isika, amin’izao fotoana izao.
Entanina izay tsy mbola nanome hevitra mba handray anjara satria misy hatrany ireo marisarisa amin’izany.Tsy mora ny asa satria rafitra vaovao mihitsy no hatsangana eo. Ho fantatra atsy ho atsy ny mety ho endriny. Efa mamaramparana ny asa ireo mpikirakira ny lafiny lalàna eo anivon’ny minisitera», hoy hatrany Razafiarison Francis.
Tsy mbola nahenoana feo kosa hatreto ireo mpisehatra tsy nanaiky lembenana tamin’ ny fanafoanama ny lalàna narafitry ny Omaci.
Dihy ankehitriny :: Hamarana ny taom-pianarana miaraka amin’ny « Kolovona » ny sekoly Rary